Mpempe Tumble - Delta Engineering Belgium
Archive si Atiya "Tumble Pack"
Tọzdee, Julaị 06, 2017 by Delta Injinịa
Mpempe Ejiri Ejima Mfe - na-ebu ngwugwu
Ngwunye a tụbara karama n'ime igbe, daa. Photocell na-agụ karama ahụ ozugbo igbe ahụ juru, ihe ntụgharị ahụ na-eme ka karama ndị ahụ banye na igbe ọzọ, 'efu'.
bipụtara Mpempe Tumble
Mọnde, 10 Mach 2014 by Delta Injinịa
Igbe tufuo mkpọ na-ebu otu
Ngwunye ọrụ a na-ebu igbe ndị nwere karama na-abaghị uru, dara ada. Nwayọọ nwayọọ iji zere nrụrụ karama ọkụ. Photocell jikoro karama ọnọdụ & kalama jụrụ na nri ntụpọ.
Silo idahari mkpọ unit
Nke a silo loading unit ibu karama n'ime 2 mgbanwe silos (alternately). Emere karama ahụ ka ọ na-adakwasị onye na-ebugharị ebugharị, n'ihi ya, a na-agụ ha 'ihe dịka'. Mgbe ahụ, a na-atụba ha na silo, site na onye na-ahọrọ efere tilting.
Mpempe akwụkwọ mpịakọta a na-ebu karama n'ime 2 na-agbanwe agbanwe silos (ọzọ). Karama ahụ sitere na onye na-ebufe ihe (na-ebili ọtọ), a na-agụ ya n'otu n'otu & tinye ya na silo, site na onye na-ahọrọ efere tilting.